न्यूज सञ्जाल: » आईसीयूमा नर्सको व्यथाः सबैको भगवान बन्न नसकिँदोरहेछ !
आईसीयूमा नर्सको व्यथाः सबैको भगवान बन्न नसकिँदोरहेछ !
न्यूज सञ्जाल १५ जेष्ठ २०७८, शनिबार ०९:१९
काठमाडौँ । केही दिन अगाडि वीर अस्पतालमा भेन्टिलेटरमा उपचाररत २७ वर्षीय युवकको अक्सिजन लेभल घट्दै गइरहेको थियो । आईसीयूमा खटिएका डाक्टर, नर्स उनको उपचारमा व्यस्त थिए । बिरामीकी श्रीमती १९ वर्षकी र छोरी ६ महिनाकी रहिछन् । यो सुन्दा आईसीयूमा कार्यरत नर्स मुना पोखरेलको मन विचलित भयो ।
मुना भन्छिन्, ‘जो निको भएर घर फर्कनुहुन्छ, उहाँहरुले भगवान जसरी व्यवहार देखाएर जानुहुन्छ । बृद्ध बा आमाले आशीर्वाद दिएर जानुहुन्छ । तर, जसलाई बचाउन सकिँदैन, उहाँका आफन्तहरुले झर्केर निकै नमिठो व्यवहार देखाएर जानुहुन्छ । उहाँहरु ठान्नुहुन्छ कि हामीले नै मारेका हौं । हामी बिरामी मार्न होइन, बचाउन यहाँ छौं । त्यो सबैले बुझ्दैनन् । तर, यो नियति सामान्य लाग्छ अहिले ।’ यो समाचार रातोपाटी डटकममा छ ।